Home » blog » Chekwaa ahụike gị na ahụike gị afọ ọhụrụ na Savings.Com
Na njedebe nke ọnwa January ka njedebe nke ọtụtụ mkpebi nke Afọ Ọhụrụ. Anyị niile anọwo ebe ahụ: ị malitere 2019 na edemede siri ike, kwere nkwa ịrụ ọrụ siri ike ma rie nri ma gụọ akwụkwọ ọzọ. Ma na mberede, ọ bụ February. Ọchịchị ndị dị nkpa anwụọla, izu ụka Super Bowl na-abịarute, n'ụzọ ụfọdụ kwa, ị na-adaghachi azụ n'ime oghere nabatara nke àgwà gị ochie.
Ọ bụrụ na nke ahụ mara ama, echegbula. Ị ka nwere oge iji rụọ ọrụ maka afọ kachasị mma gị.
Tụgharịa mkpebi 2019 gị n'ime ihe mgbaru ọsọ doro anya.
Ile anya maka ahụike gị na ịchụso ihe mgbaru ọsọ gị nwere ike ibute nsogbu na obere akpa gị. Ngwurugwu na ihe mgbakwunye, nri ọhụrụ na mgbatị na-amalite ịghọ ọnụ, karịsịa mgbe ọhụụ ndị ọhụrụ ahụ ga-apụ.
Ntugharị na-akpọnwụ, kwa. Egwuregwu ahụike gị nwere ike ịmalite ịdị na-akwa gị emo, nke ahụ nwere ike ịmalite inwe obere ájá.
Anyị nwere ụfọdụ ngwọta dị mfe ga-eme ka ọ dịkwuo mfe ịchọtaghachi mkpebi gị ma rapagidesi ike n'àgwà ọma gị - n'emebighị akụ.
Gbalịa mee ihe ọhụrụ.
Ọdịiche dị iche iche bụ ndụ nke ndụ, dị ka ha na-ekwu, nke ahụ na-agakwa maka mgbatị gị kwa. Ọ bụrụ na ndị na-eme pilata gị na-amalite ịmalite ịda mbà n'obi, gbalịa gbanwee ihe na ụtụtụ nke kickboxing ma ọ bụ yoga na-ekpo ọkụ n'ọnọdụ.
Ị ga-enwe mgbagwoju anya ihe ịma aka ọhụụ ọhụrụ nwere ike ime iji meziwanye ụda ahụ gị, na ọchịchọ gị.
Yabụ, ọ bụrụ na ọ bụ otu n'ime mmeri kachasị oyi na akụkọ ihe mere eme na nso nso a? Ekwela ka obere ihu igwe na-egbochi gị ịchụso ihe mgbaru ọsọ gị. Lelee ndị a na-enwetakwa ihe site na ụdị ngwá agha ndị dị n'èzí dị ka MountainWarehouse na Campmor, ebe ị nwere ike ịchọta ụzọ zuru ezu nke skis, ụlọ elu ihu igwe ma ọ bụ uwe ime egwuregwu iji mee ka ị na-akpụ akpụ, n'agbanyeghị oge.
Chọpụta ike nke smartwatch.
Mgbe ụfọdụ, ọ dị anyị niile mkpa ịkwalite nkà na ụzụ. Mgbe ngwaọrụ gi na aka gi nwere ike obughi nani gi agwa gi oge, ma debe ihe di n'obi gi, uzo gi kwa ubochi gi, ihe omuma gi na ihe ncheta gi, i ga-agbakwunye mkpali imeghari ma na-elegide anya na njem gi.
Anyị Health & Wellness Buying Guide enye gị jumpstart iji nyere gị aka iru ihe mgbaru ọsọ 2019 gị, ya na ọnụahịa kachasị elu na ọnụahịa kacha mma.
Mee ngwa egwuregwu egwuregwu gị.
Enweghị uwe egwuregwu na-atọ ụtọ na-ewetara gị ala? Mgbanwe dị mfe dị ka ịmepụta gị na-agba ọsọ na a ndị ọhụrụ sneakers ma ọ bụ itinye mgbatị ọhụrụ n'elu ngbanwe gị nwere ike ime ka mkpali gị ka mma.
Si n'àkwà pụọ n'ebughị ọkụ ma tie mgbatị ahụ kama. Ị nwere ike ịchekwa nnukwu na uwe mgbatị dị elu, ọbụna mgbe ị dịka otu nde ego. Gaa n'ihu, nwee achicha gị ma rie ya (nke ọma, ihe fọrọ nke nta).
Melite ụda ụda gị.
Ndi ama ọfiọk ke ikwọ emi ọyọhọ ukpep utom emi? I kwesiri ịmalite ịmalite ọkụ na 120 bpm-eche "Billie Jean" site na Michael Jackson-wee gbanwee akara ụda gị dabere na ọrụ gị, sitere na 130-160 bpm iji dakọtara gị.
Otu egwu dị egwu nwere ike ịdanye gị ka ịdekọ ndekọ-oge na-agba ọsọ gị na-agba ọsọ kwa ụbọchị, mgbe egwu siri ike, nke nwere ike inyere gị aka ilekwasị anya n'ịdị elu ma na-ewusi ike. Tinyegharia egwu gi, mee ka uche gị dị ọhụrụ.
Na-achọkwu echiche? Savings.com nwere mmelite ọ bụla a gbanwere na nke Kupọns na nkwụghachi ụgwọ iji chekwaa obere akpa gị, na mkpebi gị.